Tesco Southern Fried Chicken Nhọrọ Na Ọkpụkpụ 810G | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Tesco Southern Fried Chicken Nhọrọ Na Ọkpụkpụ 810G– Ordrs
Tesco Southern Fried Chicken Nhọrọ Na Ọkpụkpụ 810G
Ọkpụkpụ ọkụkọ ọkụkọ, nku na apata ụkwụ na mkpuchi eghere na ndịda.
Ghaa ndị na-ewepu ego ị ga-ewepụ wee chọpụta ihe ndị a na-atọ ụtọ nke ndịda eghe, thighs na nku. Obi anụ ọkụkọ ntekwasa na crispy, seasoned ghere eghe breadcrumbs iji nwaa gị tastebuds. Mee ka anụ ọkụkọ gị rie nri ezinụlọ gị site na iji fries French, nnukwu efere salad na BBQ, ketchup na mayo dips. Zuru okè maka nnọkọ na oke maka ịkekọrịta esi nri site na oyi kpọnwụrụ na nkeji 50 ma hapụ ndị ọbịa gị ka ha họrọ ọkacha mmasị ha. Otu na ọka na cob, coleslaw na wedges wedges maka mkpịsị aka na-eri oriri. Ejiri 100% thighs, drumsticks na nku mee ngwaahịa a ma mepụta ya na UK na-enweghị ihe ụtọ, agba ma ọ bụ ihe nchekwa.
Ogbe, nku na apata, ntekwasa na bred achicha kara aka
Na Tesco anyị nwere otu ndị ọrụ ugbo na-arụ ọrụ na ndị ọrụ ugbo na ndị na-ebubata ya iji meziwanye ụkpụrụ ha dị elu nke ịdị mma, ọrụ ugbo na ọdịmma. Anyị kwenyere na ọdịmma anụmanụ na-enye anụ ka mma, ọ bụ ya mere eji edozi ọkụkọ sitere na ugbo na-arụ ọrụ n'ụkpụrụ ndị a.
Nri kwesiri ka eme ya
Esi nri site na 50 mins
Ngwugwu ngwugwu: 810g